Black Friday Mac | Esi m mac
Black Friday, na-anakọta azụmahịa kachasị mma maka Mac
O doro anya na ọtụtụ n’ime gị na-amalite ịhụ ma chọọ onyinye ndị ụfọdụ ụlọ ahịa teknụzụ ndị a kacha mara amara na-amalite ịmalite maka nke a Black Friday 2015. N'ihe banyere ndị ọrụ Mac, anyị nwere "nsogbu" na akụrụngwa na - enwekarị ọnụ ahịa pụtara elu yana n'agbanyeghị agbanyeghị ego, ọ ka bụ ọnụ ahịa dị elu. Mana oge ụfọdụ ị nwere ike ịchọta ọnụ ala dị mma na kọmpụta ndị na-abụghị ụdị ọhụụ kachasị ọhụrụ nke Apple rụpụtara na ọkachasị n'ihe gbasara ngwa maka Mac anyị, ma ha bụ mkpuchi, ụlọ, akpa azụ, ekweisi, Hubs, wdg ...
Ọ bụ ya mere na m si Mac anyị ga-emepụta mkpokọta ụfọdụ n'ime ngwaahịa ndị a ewepụtara tupu '' Black Friday '' abịa n'ihu ọha. Maka nke a Anyị nwere ekele maka ndụmọdụ gị niile na ịzụrụ ihe (na ihe ndị ahụ) iji tinye ngwaahịa ndị ahụ na ndepụta nke onyinyeNke ahụ bụ, ọ bụrụ na ha metụtara Macs anyị hụrụ n'anya ma ọ bụ na ha dakọtara.
Maka nke a, m ga-amalite onwe m na usoro nke ngwaahịa m masịrị m. O doro anya na anyị anaghị akpa ókè banyere ụlọ ahịa na ha anaghị akwụ anyị ụgwọ ya, ma anyị ga-ejikọ naanị ndị tụkwasịrị obi ịzụrụ ihe na na n'ezie karịa otu onye mgbe zụta ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ nwere aha ọma n'etiti ọrụ.
2 Ihe PC
6 Ụlọ ahịa Apple
7 Adịchaghị Reseller Banana Computer
8 Adịchaghị Reseller Rossillimac
9 Echekwala ngwa ahịa ndị China
WD ike mbanye My Passport Ultra na Amazon. Ọ bụ a 1 TB HDD mpụga ike mbanye na USB 3.0 ọdụ ụgbọ mmiri maka euro 69,90 na ị ga-ahụ na ngwaahịa ugbu a site na njikọ a.
Ihe ohuru nke 12-inch nke Macbooks na ere. Nke a bụ ego na-adọrọ mmasị nke euro 90 maka obere ihe atụ dị ike nke abụọ na ihe dị ka euro 200 maka ụdị dị ike karị. Ga-ahụ ozi niile ebe a na mgbakwunye na njikọ ịzụta.
N'ime ụlọ ahịa a ebe a na-ere ụdị ngwa ọ bụla maka PC, Mac, Smartphone na ngwaọrụ ndị ọzọ, anyị na-ahụ ọtụtụ ego nke malitere ụnyaahụ.
Na skewer 32GB Leef iBridge na njikọ Lightning na otu akụkụ na USB na nke ọzọ na Black. Nwere ike ịzụta ya ozugbo site ebe a. Kpachara anya na ha nwere oke nkeji na ọnụahịa ha ugbu a dị euro 54,95 na mbupu dị iche iche, nwere Ibelata 21%.
Tucano bụ ụlọ ọrụ siri ike na ọ masịrị m nke ukwuu n'ihe gbasara akụrụngwa, imepụta na ngwaahịa dịgasị iche iche. N'okwu a, ha adịghị ka ha na-esonyere Black Friday n'oge a mana ha nwere ngalaba nwere akpa na ngwa ngwa ahịa, yabụ ọ bụrụ na ị nwere MacBook ruo 15 ″ Akpa akpa a maka euro 47,90 nwere ike ịbụ ezigbo ịzụta.
N'ime ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ha nwere onyinye maka 13-anụ ọhịa MacBook Pro na ngosipụta Retina. N'ime usoro ụlọ ahịa a, ha ga-ebuputa onyinye na ego na ngwaahịa dị iche iche kwa ụbọchị, yabụ anyị ga-ege ntị.
Onye ọrụ Apple reseller ga-eme ememme Black Friday a ma kwupụta ego na weebụsaịtị ha yana n'ụlọ ahịa n'oge Nọvemba 27-28 na 29. Anyị ga-elebara anya iji chọta ego dị mma na onye na-ere ahịa a ama ama.
Ụlọ ahịa Apple
Anyị na-eche na Apple ga-agabiga mba ndị na-abụghị US, mana anyị ga-elele anya.
Adịchaghị Reseller Banana Computer
Black Friday na-abịakwara Onye na-ere ahịa adịchaghị nke Canary Islands, Banana Kọmputa na ọ bụ na anyị ga-enwe ike ịchọta niile Macs na Apple ugbu a nwere maka ire ere na succulent ego. Anyị nwere ike ịchọta, dịka ọmụmaatụ, a 21,5-inch na-abụghị Retina iMac nwere 2,7 GHz processor, 1TB nke HDD disk na 8 GB nke Ram maka euro 1047 (nkuzi ndị nkuzi) ma ọ bụ ọhụrụ iMac Retina nke 21,5 sentimita asatọ na 3,1 GHz processor, 1TB nke diski HDD na 8 GB nke RAM maka euro 1369 (ọnụahịa ndị nkuzi).
Adịchaghị Reseller Rossillimac
na Rossellimac Apple Premium Reseller ga-esi na Black Friday bandwagon, ebe ị nwere ike ịzọpụta 100 € en MacBook, MacBook Ikuku,MacBook Pro, iMac 21 ″, iMac 21 ″ 4K na iMac 27 ″ 5K. Ọzọkwa nke iPad Ikuku na iPad Ikuku 2 nwere ego nke 40 €. El iPhone 6 128GB ọ nwere ike ịbụ nke gị n'oge ndị a maka 769. na ngwa dị ka mkpuchite, akpa azụ maka Mac, ekweisi, wdg, ha nwere a Ego 10%. Maka ozi ndị ọzọ gaa na edemede a gbasara ihe a Rossellimac.
Echekwala ngwa ahịa ndị China
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, mana ntakịrị ihe ga-abụ ire nke kọmputa Mac, anyị nwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke ndị China. Enwere ọtụtụ n'ime ha na agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na onye ọ bụla nwere ike ịnwe ọmarịcha ahụmịhe, ma m hapụrụ ha abụọ Mụ onwe m enwetala ezigbo ahụmihe gbasara nzụta m. Bụ Aliexpress.comN'ime ha abụọ, ị nwere ike ịchọta akụkụ nke ya Black Friday nke nwere ngwa na ngwa ndị ọzọ.
Anyị na-aga n'ihu dezie isiokwu ahụ na nke ọ bụla kachasị mma maka Macs anyị ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Black Friday, na-anakọta azụmahịa kachasị mma maka Mac
Noise Reducer Pro, n'efu maka obere oge